CDM နိုင်ငံ့ဝန်ထမ်းများ – DVB
တနိုင်ငံလုံး အတိုင်းအတာနဲ့ တိကျတဲ့ ကိန်းဂဏန်းတွေ ထုတ်ဖော်နိုင်ဖို့ အချက် အလက်တွေလိုအပ်နေတဲ့အတွက် အာဏာဖီဆန်ရေးလှုပ်ရှားမှု(Civil Disobedience Movement)မှာ ပါဝင်သူ နိုင်ငံ့ဝန်ထမ်းတွေအနေနဲ့ အွန်လိုင်းကနေ စာရင်းသွင်းနိုင်ဖို့ ဖိတ်ခေါ်နေပါတယ်။
“မတရားသော အမိန့်အာဏာဟူသမျှကို ဖီဆန်ကြတဲ့ Civil Disobedience Movement ဟာ အရှိန်ပြင်းပြင်းနဲ့ ကြီးထွားလာနေပြီပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် အခုအ ချိန်မှာဆိုရင်တော့ CDM မှာ ဘယ်ဝန်ကြီးဌာနတွေ၊ ဘယ်တိုင်းဒေသကြီး/ပြည်နယ်တွေ က ပြည်သူ့ဝန်ထမ်း ဘယ်နှစ်ယောက်ပါဝင်နေပြီလဲ၊ ဘယ်လို အကူအညီအထောက်အပံ့ တွေ လိုအပ်နေပြီလဲ ဆိုတာကို တနိုင်ငံလုံး အတိုင်းအတာနဲ့ တိကျတဲ့ ကိန်းဂဏန်းတွေ ထုတ်ဖော်နိုင်ဖို့ အချက်အလက်တွေ လိုအပ်လာပြီပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီအချက်အလက်တွေ ကို အသုံးပြုပြီး CDM ကို အရှိန်မြှင့်တင်ခြင်း၊ နိုင်ငံတကာကို တင်ပြခြင်း၊ ရန်ပုံငွေနှင့် အ ခြားအကူအညီအထောက်အပံ့များ စီမံခန့်ခွဲဖြန့်ဝေခြင်း အစရှိတဲ့ နေရာတွေမှာ ပြန်လည် အသုံးပြုနိုင်မှာပဲဖြစ်ပါတယ်”
လတ်တလောမှာတော့ Civil Disobedience Movement ဖေ့စ်ဘွတ်ခ်စာမျက်နှာ ပေါ်က စာရင်းကောက်ယူမှုအတွက် အွန်လိုင်းဖောင်တခုကို ပြင်ဆင်ပေးထားခဲ့ပြီး သက် ဆိုင်ရာ CDM မှာ ပါဝင်တဲ့ ပြည်သူ့ဝန်ထမ်းတဦးအနေနဲ့ မိမိဌာနကို ကိုယ်စားပြုပြီး ဌာန နဲ့ သက်ဆိုင်တဲ့ အချက်အလက်တွေကို ထည့်သွင်းနိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။
အဆိုပါ CDM ဝန်ထမ်းတွေ လုံခြုံစိတ်ချရစေဖို့အတွက် အရေးကြီး ကိုယ်ရေးကိုယ် တာ အချက်အလက်တွေကိုတော့ မေးမြန်းထားတာမျိုးမရှိပဲ ဖြည့်သွင်းလိုက်တဲ့ အချက် အလက် မှန်ကန်ခြင်း ရှိ/မရှိ သိနိုင်ဖို့နဲ့ ကူညီထောက်ပံ့မှု တစုံတစ်ရာ လိုအပ်ခြင်း ရှိမရှိ သိရှိနိုင်ဖို့အတွက် ဆက်သွယ်မေးမြန်းနိုင်ဖို့ ကိုယ်စားပြုသူရဲ့ ဖုန်းနံပါတ်နဲ့ အီးမေးလ် လိပ်စာကို တောင်းခံထားတာ ဖြစ်တယ်လို့ ဆိုပါတယ်။
နာမည်၊ လိပ်စာ အစရှိတဲ့ အရေးကြီးအချက်အလက်တွေကို လုံးဝကောက်ခံခြင်း မရှိပဲ ကိုယ်စားပြုသူ Representative ရဲ့ ဖုန်းနံပါတ်နဲ့ အီးမေးလိပ်စာကိုလည်း မသမာ သူတို့လက်ထဲ မရောက်စေရန်အတွက် နည်းပညာဆိုင်ရာ လုံခြုံရေးစီမံချက်တွေကို ပြင် ဆင်ထားတယ်လို့ ဖော်ပြပါရှိပါတယ်။
ဒီအချက်အလက်ကောက်ယူမှုမှာ ပါဝင်မယ့် ဝန်ထမ်းတွေအတွက် လုပ်ဆောင်ရ မယ့် အဆင့် ၄ ဆင့်သာ လိုအပ်ပြီး အောက်မှာ အသေးစိတ် ဖော်ပြပေးထားပါတယ်။
အချက်အလက်ဖြည့်သွင်းဖို့အတွက် အဆင့် ၄ ဆင့်ပဲလိုပါတယ်။
1. http://bit.ly/cdmmyanmar လင့်ကို နှိပ်ပါ။
2. မိမိနှင့် သက်ဆိုင်သော ဖောင်အမျိုးအစားကို ရွေးပြီး “ဖောင်ဖြည့်သွင်းပေးရန်” ဟူသော ခလုပ်နှိပ်ပါ။
မှတ်ချက် - ဝန်ကြီးဌာနမှ ပြည်သူ့ဝန်ထမ်းများ ဆိုလျှင် မိမိ သက်ဆိုင်ရာ ဝန်ကြီးဌာနအတွက် ခလုပ်ကို ရွေးပြီးနှိပ်ပါ။ ဆေးရုံများတွင် တာဝန်ထမ်းဆောင်သော ပြည်သူ့ဝန်ထမ်းများဆိုလျှင် “ဆေးရုံ” ဟူသော ခလုပ်ကို ရွေးပြီး နှိပ်ပါ။ ကျောင်းများတွင် တာဝန်ထမ်းဆောင်သော ပြည်သူ့ဝန်ထမ်းများဆိုလျှင် “ကျောင်း” ဟူသော ဖောင်အတွက် ခလုပ်ကို ရွေးပြီး နှိပ်ပါ။ တက္ကသိုလ်များတွင် တာဝန်ထမ်းဆောင်သော ပြည်သူ့ဝန်ထမ်းများဆိုလျှင် “တက္ကသိုလ်” ဟူသော ဖောင်အတွက် ခလုပ်ကို ရွေးပြီး နှိပ်ပါ။ ပုဂ္ဂလိက ကုမ္ပဏီများတွင် တာဝန်ထမ်းဆောင်သော ပြည်သူ့ဝန်ထမ်းများဆိုလျှင် “ပုဂ္ဂလိက ကုမ္ပဏီ” ဟူသော ဖောင်အတွက် ခလုပ်ကို ရွေးပြီး နှိပ်ပါ။
3. မေးထားသောမေးခွန်းများအတွက် အဖြေများကို ထည့်သွင်းဖြေဆိုပါ။
4. အချက်အလက်စုံလင်စွာ ဖြည့်ပြီးသွားလျှင် “Submit” ဟူသော ခလုပ်ကို နှိပ်ပါ။
ဒီအဆင့်တွေ ပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့ အချက်အလက်ဖြည့်သွင်းခြင်း အောင်မြင်ပြီပဲဖြစ်ပါတယ်။
ယခုဖောင်တွင် မိမိဌာနမှ CDM ပါဝင်သူ ပြည်သူ့ဝန်ထမ်းများရဲ့ အကူအညီလိုအပ်ချက်များကို ပွင့်လင်းစွာ ထည့်သွင်းပေးနိုင်ပါတယ်။ မိမိတို့ဘက်မှ ကူညီနိုင်သည်များကို ပြန်လည်ဆက်သွယ်ကူညီပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။
မိမိသည် မိမိဌာနကို ကိုယ်စားမပြုနိုင်ပါက ကိုယ်စားပြုနိုင်မည့်သူကို ဆက်သွယ်ပြီး ယခုဖောင်တွင် ဖြည့်သွင်းပေးရန် အသိပေးနိုင်ပါတယ်။
CDM တွင် ပါဝင်နေသော ပြည်သူတို့အတွက် သူရဲကောင်းတွေဆီသို့ ယခုဖောင် ရောက်ရှိစေရန် မျှဝေပေးဖို့ မေတ္တာရပ်ခံပါတယ်။